उपेन्द्र यादवले किन रोजे सप्तरी ? भन्छन्, जन्मभूमिको मायाले -
उपेन्द्र यादवले किन रोजे सप्तरी ? भन्छन्, जन्मभूमिको मायाले
१६ मंसिर २०७४, शनिबार ११:३५ 845 पटक हेरिएको
सप्तरी । संघीय समाजवादी फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको व्यक्तिगत र राजनीतिक जीवनका घुम्तीहरु पार गर्दै अगाडि बढेको छ । उनी सप्तरीमा जन्मे हुर्के । त्यही विद्यायसम्मको अध्ययन गरे । सुनसरीबाट संघर्ष सुरु गरे । र विराटनगरबाट राजनीतिक यात्रा ।
यादव एमालेबाट राजनीतिक शुरु गरे । बीचमा माओवादी निकट भए र दोस्रो मधेश आन्दोलनपछि उनी मधेशवादी दलका सर्वोच्च नेता भए ।
चुनावी मैदानमा पनि उनको उस्तै घुम्ती आए । अहिले उनी तेस्रो पटक चुनाव लड्दैछन् । २०६४ र २०७० मा मोरङ ५ र सुनसरी ५ बाट चुनाव लडे । सुनसरीबाट दुवै पटक जिते । मोरङबाट एकपटक । तर, २०७० को प्रतिनीधिसभा चुनावमा उनले मोरङ र सुनसरी छाडे । अहिले सप्तरी २ बाट चुनाव लडेका छन् ।
आफ्ना परम्परागत निर्वाचन क्षेत्र छाडेर संघीय समाजवादी फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव किन सप्तरीमा पुगे ? राजनीतिक वृतमा यो प्रश्न उठिरहेको छ । मोरङ र सुनसरीका मतदाताले उपेन्द्रको यो निर्णयलाई कसरी हेरेका छन् ? यो अर्को महत्वपूर्ण प्रश्न हो ।
सप्तरीका मतदाताका लागि उपेन्न्द्र यादवको आगमन के अर्थ राख्छ ?
पूर्व पश्चिम राजमार्गको सुनसरी लोकहीबाट ६ किलोमिटर उत्तर रहेको उपेन्द्र यादवको निवास जाने सडक पक्की छ । हालसालै बनाएको पक्की सडक । मधेशका गाउँमा राम्रो पक्की सडकले हामीलाई अचम्मित बनायो । सोच्यौँ, उपेन्द्रले यहाँ विकास गरेका रहेछन् । त्यस अगाडि मोरङमै एक जनाले राजमार्गबाट कच्ची सडक भएर उपेन्द्रका घर जान सकिने सुनाएका थिए ।
कोशी गाउँपालिकाका प्रभुनारायाण यादव भन्छन्,– ‘उपेन्द्र यादव जहाँ गएपनि जित्ने नेता हुनुहुन्छ, तर यही सुनसरीबाट लड्दा हुन्थ्यो, उहाँ यहाँबाट पनि जित्नुहुन्थ्यो । हामी अनाथ भएका छौ हामी रुदैछौं ।’
उपेन्द्र यादव सुनसरीबाट अध्ययन गरेर मास्टरी पनि गरेका थिए । पछि उच्च शिक्षाका लािग उनी विराटनगर गएका थिए । जागिर गर्दै उतै घरजम गरेर बस्न थालेको बताइन्छ ।
उनका भाउजु तारादेवी यादव भन्छिन, ‘उपेन्द्र यादव जहाँबाट लडेपनि राम्रै हो, उहाँ यहाँको नेता मात्र होइन, देशैभरिका नेता हुनुहुन्छ, उहाँ जहाँबाट पनि चुनाव लड्न सक्नुहुन्छ ।’
जसले पनि उपेन्द्र यादव यतैबाट चुनाव लडिदिए हुन्थ्यो भन्छ, ‘आफूहरुको चाहना पनि उनी सुनसरी आफ्नै घरबाट चुनाव लडि दियोस् भनि चाहना रहेको तर चाहना राखेर मात्र हुँदैन ।’
पहिलो सविधानसभा चुनावमा विराटनगरबाट चुनाव जितेका उपेन्द्र यादवलाई निर्वाचनमा भाग लिन त्यहाँबाट पार्टी कार्यकर्ताले चाहेका थिए । केन्द्रमा नाम पनि पठाएको थियो तर उनले सप्तरीलाई रोजेपछि विराटनगरका कार्यकर्ताहरु निराश भएका छन् ।
उपेन्द्र यादव चुनाव लड्ने क्षेत्र नम्बर ५ फोरम नेपालको पकड भएका क्षेत्र हो । चुनाव लडेको भए जित्न सकिन्थ्यो । तर आफ्नो जन्मभूति र आन्दोलनको भूमि सप्तरी गए जहाँ फोरम नेपाल र राजपा नेपालको राम्रो संगठन रहेको छ ।
फोरम नेपालका केन्द्रीय सदस्य एवं मोरगं– ५ का प्रदेशसभाका उम्मेदवार जयराम यादवले भने, ‘उपेन्द्र सरलाई यतैबाट चुनाव लड्नुस् भनेकै हौं, नाम पनि पठाएकै हौं तर उहाँले सधै एकै ठाउँबाट चुनाव नलडौ, अरुलाई पनि मौक दिऔं भनेर उहाँ सप्तरी जानु भएको हो ।’
पार्टीका राष्ट्रिय अध्यक्ष भएका हुनाले उनी देशका जुनसुकै ठाउँबाट चुनाव लड्न सक्ने बताउँदै यादवले भने, ‘इच्छा भएर मात्र हुँदैन, दुई नम्बरमा थुप्रै मधेशी नेताहरु चुनाव लडेका छन्, उपेन्द्र यादव एक नम्बरबाट चुनाव लडेर जित्दा अर्कै सन्देश जान्थ्यो, देशैभरि राम्रो म्यासेज जान्थ्यो । एक नम्बर प्रदेशमा पनि मधेशी नेता जितेको चर्चा हुन्थ्यो ।’
आन्दोलनको अगुवाई गरेका उपेन्द्र यादव सप्तरी आएर चुनाव लड्नु यहाँका लागि सौभाग्य भएको बताउँछन् उनका पार्टीका कार्यकर्ताहरु । फोरम नेपालका सप्तरी अध्यक्ष दिनेश यादवले उपेन्द्र यादव बाहिरको हल्ला गर्नु गलत भएको बताए । ‘उनको यो जन्मधर्ती हो, उनी यहाँ मज्जाले चुनाव लड्न पाउनुपर्छ’– उनले भने ।
मनोनयन दार्ता गराएपछि उपेन्द्र यादव बाहिरको भनि प्रतिद्धन्दीहरुले कुरा उठाएपछि उनले आफ्नो नागरिकता सार्वजनिक गर्न लगाएका थिए । नागरिकता अनुसार उनको जन्मस्थान भगवतपुर सप्तरी उल्लेख गरिएको छ । प्राथमिकको पढाई सप्तरीको बभनगामाकट्टीको लक्ष्मी बल्लभ नरसिंह उच्च मा.वि. मा भएको थियो । पछि सुनसरी गएपछि त्यही पढाई सुरु गरेका थिए ।